rm29,bldg10,saung hay man housing,ward30,north dagon ts,Yangon
Shwe San Chain Real Estate 09-253377725, 09-263213200, 09-253101734,
No.32,Kyaikasan Pagoda St, (C-2), Thingangyun Township, Yangon.
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း 50
09-5060408, 09-421123255, 09-252598022,
အမှတ်(၂၉), မြေညီထပ်, မင်းနန္ဒာလမ်း, နွယ်အေးရပ်ကွက်, ဒေါပုံမြို့နယ်, ရန်ကုန်မြို့။
121 အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
09-5199367, 09-5078166, 09-4200 99583,
121 ဆေးဆိုင်၊ ပန်းဆိုးတန်းနှင့် အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း 25
Casa Green Engineering Co,. Ltd.
09-450040542, 09-5053384, 09-5111849, 09-450064168,
Casa Green Engineering Co. Ltd.Address : No. 43 Ma Kyee Kyee Street, 2nd Floor, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar
09 73086884/ 09 422209356.,
တိုက် ၃ အခန်း ၄ သမိုင်းလမ်းဆုံ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၃ ရပ်ကွက် မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့
No.17(A)Wailu Won 7St, Sanchaung township
Hnin mg real estate
အမှတ်၁၀၄ ဘီ,မြေညီထပ် မုဒိတာအိမ်ရာ(၁),အထက်ဗဟိုလမ်း သမိုင်း မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
AUNG MINGALR LANE/4 WARD/MAYANGONE
09-73242264, 0931805919, 09254712649,
ဝေဟင်လမ်း၊ ၃ရပ်ကွက်၊ စကိတ်ကွင်းအနီး၊ ဝေဘာဂီမြို့သစ်၊ မြောက်ဥက္ကလာ။
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း 3
တက်နေလင်း အိမ် ခြံ မြေ အကျိုးဆောင်
အမှတ်(၇၆၃) ငမိုးရိပ်(၂)လမ်း အပိုင်း(၃) သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။
ကြော်ငြာ စုစုပေါင်း 2
N.N.C Construction co.,ltd
no 636 thamainbayan st 35 ward. northdagon township. yangon
09 25 223 9664, 09 25 223 9665,
Aung Zaya Housing, Insein.
NG Reas Estate Service
အမှတ်-72 ဦးဝိစာရလမ်းနှင့် ချင်းတွင်းလမ်းထောင့်ကမာရွတ်မြို့ နယ်ွ
MD Phyo Ko Ko
Forward Yangon Services Co.,Ltd
Build (C/248), Room (A/1) Laydauntkan Road,Thingangkyun Township,Yangon.
< 1234567 8910 11 > Last Useful Links